Duplicate Duplicate Slide
Islaayidii ammaa booda garagalch islaayidichaa galcha.
Tokkon tokkoon qaphxii toorii sadarkaa ol'anaa (matadure barreeffamaa toorii sadarkaawwan irraa sadarkaa tokko gadi suqun barresi) islaayidicha haaraa filatamee irraa islaayidii haaraa uuma. Tooriin barreeffamaa kuni mataduree islaayidii haaraa ta'a. Qaphxiiwwan toorii sadarkaa olaanaa jala islaayidicha jalqabaa irra jiran sadarkaa tokkoo gara islaayidicha haaraatti ce'uu.
Islaayidii haaraa matadureewwan islaayidootaa islaayidiicha filatameehordofan keessaa tarree rasaasa'ee qabaatuu Uumi. Islaayidiichii goolaba duba islaayidiichaa maayyiitti saagama.
Guyyaa fi yeroo akka dirreetti dabala
Calaqqee Sochii Qabu